दुर्गा प्रसाईंले पाएको लौरोको वास्तविकता अर्कै, प्रसाईका निकटस्थहरुले नै खाए जिल ! – Annapurna Post News
June 18, 2022 sujaLeaveaComment on दुर्गा प्रसाईंले पाएको लौरोको वास्तविकता अर्कै, प्रसाईका निकटस्थहरुले नै खाए जिल !
काठमाडौं । दुबईका राजकुमार जुमा अल मोक्तुमले मेडिकल व्यवसायी तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंलाई उपहार दिएको लौरोको वास्तविकता अर्कै रहेको खुलेको छ । उक्त लौरो सुनको नभएको खुलेपछि प्रसाईका निकटस्थहरुले नै जिल खाएका हुन् ।
सुनको लौरो भन्दै प्रसाईले उपहारस्वरुप आज पाएको लौरोलाई भाइरल बनाइएको थियो । राजकुमार मोक्तुमले प्रसाईंलाई आज झापास्थित चन्द्रगढी विमानस्थलमा सुनको जस्तै देखिने लौरो उपहार दिएका थिए।
उपहारमा पहेँलो लौरो प्राप्त भएपछि उक्त लौरो सुनको भएको अनुमान गरिएको थियो। लौरो प्राप्त भएपछि यस विषयमा बुझ्दा उक्त उपहार सुनको नभएको जानकारी प्राप्त भएको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले बताए।
‘‘स्वागत गर्न जाँदा सुनको जस्तै देखिने लौरो उपहारमा प्राप्त भएको थियो, हामीले सोध्ने कुरा पनि भएन,” उनले भने, ‘‘पछि त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयमा बुझ्दा सुनको जलप लगाइएको लौरो भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।” यद्यपि, आफूहरूले अहिलेसम्म उक्त लौरो सुनको होरहोइन भनेर जाँच नगरेको उनले बताए।
तपाइको यो साता कति शुभः ? हेर्नुहोस् असार ५ गते देखी असार ११ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
आज यी प्रदेशका वर्षाको संभावना
उपमेयर सुनितासँगै सिसडोल पुगेका मेयर बालेनले निकाले कमालको आइडिया, बर्षौदेखि तनाव झेलिरहेका स्थानियहरुमा छायो खुसीयाली
June 3, 2022 suja